Xiaomi ဂျာမနီ သည် Vodafone နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည် – Pandaily
Xiaomi ဂျာမနီ သည် Vodafone နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်
May 31, 2022, 12:51ညနေ 2022/05/31 14:04:25 Pandaily
တရုတ်၏ ထိပ်တန်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ၏ ဂျာမန် ဌာနခွဲXiaomi နဲ့ တယ်လီ ကွန်း ကုမ္ပဏီကြီး Vodafone တို့ ပူးပေါင်းဒါကေတာ့ Xiaomi ရဲ႕ တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဤ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် နှစ်ဖက်စလုံး မှ စမတ်ဖုန်း နှင့် IoT ပစ္စည်းကိရိယာ လုပ်ငန်း ကိုတိုးချဲ့ ရန်နှင့် နောက်ထပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရည်ရွယ်သည်။
Xiaomi ဟာ အနာဂတ္မွာ ကမာၻ တစ္ဝ ွမ္း က သံုးစြဲ သူ အမ်ားအျပား အတြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ စမတ္ က်က် အေတြ႔အႀကံဳ ေတြ ရရွိ ေစဖို႔ Vodafone ဂ်ာမနီ
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Vodafone သည် နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Vodafone တွင် ပြည့်စုံသော စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်နှင့် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင် မှုစနစ် ရှိပြီး ဖောက်သည် များ တိုးပွား လာခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေး ခြင်းနှင့် တန်ဖိုး ကိုဖန်တီး ခြင်းတို့တွင် အားသာချက်များရှိသည်။ Vodafone သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားလှယ် ရုံး ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သော တရုတ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့သည်။
တကယ္ေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာ ပိုင္းမွာ Vodafone နဲ႔ Xiaomi တို႔ဟာ ဥေရာပ ေစ်းကြက္ ရွစ္ ခုမွာ Vodafone ရဲ႕ Gigabit 5G ကြန္ရက္ ထဲကို ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္တဲ့ Xiaomi 10T Lite 5G စမတ္ဖုန္း ကို ပူးတြဲ မိတ္ဆက္ သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
Xiaomi သည် ၂၀ ၂၂ Q1 ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးထို ကာလအတွင်း စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၃ ၂၈. ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၁. ၆ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၃. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ Xiaomi ရဲ့ စမတ်ဖုန်း လုပ်ငန်း ဟာ ကမ္ဘာ့ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုနဲ့ ဈေးကွက် ဝေစု စံချိန်တင် မြင့်တက် ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တင်ပို့ မှုမှာ ယူနစ် သန်း ၁၉၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၀. ၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။